Iinkqubo ezi-5 zokwenza ii-GIF ngokukhawuleza nangokulula | Iindaba zeGajethi
Iinkqubo ezi-5 zokwenza ii-GIF ngokukhawuleza nangokulula
Ii-GIFs bezikho ukususela kumaxesha akudala, sizisebenzisa nanini na apho sinakho, ngoku ngaphezulu kweenkqubo zokusebenza phantse kwazo zonke ii-smartphones ezibandakanya phakathi kweekhibhodi zabo. I-GIF ligama elithetha Ifomathi yoTshintshiselwano ngeGraphics Le fomathi yenziwe yinkampani yoNxibelelwano yaseMntla Melika, ixhasa ubuninzi bemibala engama-256 kwaye ngokulandelelana ivelisa uthotho lwemifanekiso ehlala phakathi kwemizuzwana emi-5 ukuya kweli-10. Azinasandi kwaye ubungakanani bazo buncinci kuneefayile zeJPG okanye zePNG.
Kuqhelekile ukufumana ii-GIF endaweni ye-MeMes eqhelekileyo, kuba ezi ziyahamba kwaye zisixelela ngaphezulu komfanekiso we-tuli. Kuqhelekile ukuzibona kwiiforamu ezikwi-intanethi okanye kwi-Twitter, nangona ngoku kulula ukuzibona kuWhatsApp. Kodwa, Kutheni usebenzisa ii-GIFs kwabanye xa sinokwenza ezethu? Kukho iinkqubo ezenza ukuba lo msebenzi ubelula kakhulu kuthi. Kule nqaku siza kubonisa iinkqubo ezi-5 ezilungileyo zokudala ii-GIF ngokukhawuleza nangokulula.
2 I-SSuite GIF yoPhilayo
3 Isipho esineGIFtedMotion
5 UMenzi weGiphy GIF
Phantse inkqubo yokuhlela iifoto esetyenziswa ngokubanzi njengenye yeFotoShop, enokusetyenziselwa ukwenza ezona GIF zibalaseleyo. Phakathi kobuninzi bemisebenzi kukwenza ii-GIFs, kodwa ngenxa yoku Imifanekiso esifuna ukuyihlela iya kuba kwifomathi yePNG. Nangona le nkqubo igqityiwe, inokudideka kakhulu kubantu abangenamava, kuba ukhetho lwayo lukhulu kangangokuba luyasongamela.
Ukuba sifuna ukuyizama kwaye senze ezethu ii-GIFs ukongeza ekuhleleni iifoto zethu njengeengcali eziyinyani, sinokuzikhuphelela kunye nokuzifaka simahla kwiphepha lalo iwebhusayithi esemthethweni. Inkqubo iyafumaneka kuzo zombini IiWindows njengeMacOS.
I-SSuite GIF yoPhilayo
Ukuba sikhangela inkqubo elula kodwa esebenzayo xa sisenza ii-GIF zethu zoopopayi, ngaphandle kwamathandabuzo yile siyifunayo. Iifayile esiza kuzenza kule nkqubo ziya kuhambelana nazo zonke izikhangeli zewebhu zangoku kwaye sinokwabelana kwaye sijonge ngaphandle kwengxaki. Ukwenza oku, kuya kwanela ukongeza imifanekiso esifuna ukuyihlela ngokuchanekileyo, ukwenza oopopayi ngokuchanekileyo. Singaqwalasela zonke iiparameter, ukusuka kwixesha lokuvezwa ukuya kwisantya salo.
Umhleli uxhasa iifomathi zeJPG, PNG, BMP kunye neGIF. Eyona nto ilungileyo malunga nenkqubo kukuba ukukhanya kakhulu ngesisindo esingakhathaliyo se-5MB kwaye ayifuni ukufakwa kwangaphambili. Singayikhuphela simahla kwiphepha lakho Iwebhu esemthethweni.
Isicelo siyilelwe kuphela kwaye senzelwe kuphela ii-GIF zoopopayi. Esi sicelo asifuni amava amaninzi kubahleli beefoto kuba kulula kakhulu ukusisebenzisa kwaye siyasivumela ukuba senze ii-GIF zethu ngamanyathelo alula, sibeka imifanekiso ngendlela eyiyo kwaye silungelelanise ixesha lokuvezwa ngendlela esithanda ngayo. Sisicelo somthombo ovulekileyo ke simahla kwaye ayifuni ukufakwa kwangaphambili.
Isicelo sinokusetyenziselwa ukuqhuba ngepeni okanye kwihard disk yangaphandle njengoko ingafuni ukufakwa kwinkqubo yokusebenza. Ixhasa iifomathi ezininzi kubandakanya iPNG, iJPG, iBMP kunye neGIF. Nangona ingadingi kufakelwa, kufuneka siyihlaziye iJava kwiqela lethu. Ujongano lwayo luthe ngqo kodwa lulula kwaye amaxesha alo wokulayisha aphezulu, kodwa iziphumo zilindelwe. Ukuba ufuna ukuzama esi sicelo ungasikhuphela kwifayile ye- iwebhusayithi yomdali.
Enye yezona ndawo zilungele ukuhlelwa kweefoto. Isicelo silayishwe ngeendlela zokuhlela ifoto, kodwa kunye nokukhetha ukwenza ii-GIF zethu. Sifumana uninzi lweenketho zamaqela ezisivumela ukuba silungise ngokulula kwaye siphucule iifoto zethu. Ukwenza ii-GIFs kufuneka sisebenzise iifoto ezininzi ukwenza umfanekiso ophilayo. Inkqubo inomdla kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, kodwa njengeGIFtedMotion, iyacotha kwaye inzima xa kusetyenzwa, nangona isiphumo sikufanele, kukho ezikhawulezayo.
Le nkqubo ikhululekile ngokupheleleyo njengangaphambili kwaye sinokuyikhuphela ngaphandle kokubhaliswa kwangaphambili kwiphepha layo Iwebhu esemthethweni.
UMenzi weGiphy GIF
Okokugqibela, inkqubo eme ngokulula ekusebenziseni kwayo kunye nonxibelelwano oluhle. Ngayo sinokwenza ii-GIF zoopopayi simahla kwimizuzu nje embalwa. Banokuphuhliswa ngokulandelelana kwemifanekiso ethathwe kwindawo okanye kwigalari yobuqu. Nangona nathi sinokukhetha ukwenza ii-GIFs kwiividiyo nokuba kwigalari yethu okanye kwiYouTube okanye ezinye usetyenziso lwevidiyo. Ngaphandle kwesicelo isicelo esinika umdlalo omninzi xa sisenza imifanekiso yethu yoopopayi ukuba siyisebenzise naphina.
Eyona nto intle malunga nesi sicelo kukuba sisicelo seWebhu ngenxa yoko asifuni naluphi na uhlobo lofakelo lwangaphambili, faka nje eyakho iwebhusayithi esemthethweni kwaye usebenzise omnye wemisebenzi eyahlukeneyo eyinikelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iinkqubo ezi-5 zokwenza ii-GIF ngokukhawuleza nangokulula
Ezona zipho zibalaseleyo zobugcisa kusuku lukatata
I-FreeBuds 4i: IHuawei ibuyela kumgangatho / kwixabiso eliphambili